साजिद र सपनाहरु
उमेश राई 'अकिंचन', (विराटनगर, हालः कीर्तिपुर)
"म यही छु तिम्रो सम्झनाको फोटो मुन्तिर
सम्झनाको एल्बम पल्टाइ रहेका हौला ।"
साजिदले आफैं बोल्न शुरु गर् यो "एक्सक्यूज मि, कुन बुक खोज्नु भएको होला?"
रोशनीले मुस्कुराएर उत्तर दिइन "पिपल्स अफ नेपाल"
"तपाइँले नि?" रोशनीले प्रश्न गरीन् ।
"फैटलिज्म एण्ड डेभलेपमेन्ट" साजिदको उत्तरमा उमङ्ग मिसियो । दुई किताबहरु तर उही लेखक डोर बहादुर बिष्ट मिल्न गएकोले उनीहरु दुबै खुसी देखिए ।
"पिपल्स अफ नेपाल" जुन किताबले नेपाललाई साझा फूलबारीको रुपमा चित्रित गरेको छ । साजिद नेपालको अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायबाट आएको भएर होला उस्लाई समता र विकासका किताबहरु मन पथ्र्यो ।
यसरी यिनै बोलिका बाटाहरुले उनीहरु मित्रतामा गाँसिए । अब साजिद र रोशनी पढाइसँगै एक अर्कालाई प्रेम गर्न थाले । काठमाडौंको जाडो महिनारातो गुलाफको शहरजस्तो देखिने मौसममा नयाँ उमङ्गको साटासाट गरे यी दुईले । "ह्यापि भ्यालेण्टाइन डे, वि स्याल लिभ आवर लाइफ लाइक पोएम लेखिएका कार्ड र राता गुलाफहरु ।"
"कविता जस्तो जीवन कस्तो हुन्छ थाहा छ ?"
यो एक्काइसौ शताब्दि सभ्यता र एकताको युग हो । दुवैलाई जात धर्म वर्गको प्रवाह थिएन । परवाह थियो त पढाइकोत्यसपछि बनाउनुपर्ने करिएरको । द्वितीय वर्षको परीक्षा पश्चात साजिद र रोशनी पनि शोधपत्र लेखनतिर लागे । 'शोधपत्र होइन सारपत्र हो' साथीहरु ठट्टा गर्थे । तर रोशनी र साजिद आ-आफ्नो शोधपत्रको विषयमा दत्तचित्त भएर अध्ययन गर्थे ताकि कुनै उपयोगी तथ्य उजागर गर्न सकियोस । सायद त्यही नयाँ विषयवस्तु खोज्ने जिज्ञासु बानिको कारण साजिदले न्यू एरा अनुसंधान संस्थाबाट दिइने अनुसंधानवृत्तिको सहयोग प्राप्त गर् यो । रोशनीले केयर नेपाल अन्र्तगत अनुसंधान अधिकृतको जागिर पाइन ।
'साजिद मेरो विहेको चर्चा घरमा व्यापक भइरहेको छ, क्यानाडा बस्ने डाक्टरसँग ।' साजिदको अघि रोशनीले आफू दुःखी भएको अभिनय गरेपनि उनको आँखामा नाचिरहेको उमङ्र्र्र्लाई साजिदले स्पष्ट देख्यो ।